Lithium Polymer bateria
Kitapo bateria ionon'ny lithium
Namboarina manokana ny bateria
Batterie karazana prismatic
Azo sarahina ve ny telefaona mandritra ny alina?
Na dia maro aza ny telefaona finday amin'izao fotoana izao izay miaro be loatra, na dia tsara toy inona aza ny majika, misy ny lesoka, ary izahay mpampiasa dia tsy mahalala firy ny fikojakojana finday ary matetika tsy mahalala ny fomba hanarenana azy na dia raha miteraka fahasimbana tsy azo sitranina. Ka, alao aloha fantarina hoe ohatrinona o ...
Mila takelaka fiarovana ve ny bateria lithium?
Ny bateria lithium dia mila arovana. Raha tsy manana takelaka fiarovana ny bateria lithium 18650, voalohany, tsy fantatrao hoe hatraiza ny habetsaky ny bateria lithium, ary faharoa, tsy azo ampiharina tsy misy takelaka fiarovana izy io, satria ny tabilao fiarovana dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny lithium. ..
Fampidirana ny bateria LiFePO4
Tombony 1. Fanatsarana ny fahombiazan'ny fiarovana Ny fatoran'ny PO ao amin'ny kristaly fosfat vy lithium dia miorina ary sarotra lo. Na dia amin'ny hafanana avo na mihoampampana aza dia tsy hianjera izy io ary hiteraka hafanana na hamorona akora mahery amin'ny fanamafisana oksizenina amin'ny rafitra mitovy amin'ny lithium cobalt oxide ...
Fahalalana momba ny bateria Lithium Cylindrical
1. Inona no atao hoe bateria lithium misy varingarina? 1). Famaritana ny batterie cylindrical Ny bateria lithium cylindrical dia mizara ho samy hafa amin'ny rafitra fosfat vy lithium, oksidia kobalt lithium, manganith lithium, hybrid cobalt-manganese, ary ireo fitaovana ternary. Mizara roa ny akorandriaka ivelany ...
Inona no atao hoe bateria lithium polymer
Ilay bateria antsoina hoe polymith lithium dia manondro bateria ion lithium izay mampiasa polymer ho electrolyte, ary mizara roa: "semi-polymer" sy "polymer all". "Semi-polymer" dia manondro ny famolahana sosona polymer (matetika PVDF) eo amin'ny sakana fi ...
DIY an'ny fonosana bateria 48V LiFePO4
Tutorial momba ny fanangonana bateria phosphate lithium vy, ahoana ny fomba fanangonana fonosana bateria lithium 48V? Vao tsy ela akory izay, te-hanangona fonosana bateria lithium fotsiny aho. Efa fantatry ny rehetra fa ny entona elektrôra tsara an'ny bateria lithium dia lithium cobalt oxide ary ny electrode ratsy dia karbonina. ...
Fahalalana ny fizotry PACK bateria lithium
Fahalalana momba ny paikady Lithium Battery PACK Ny bateria Lithium dia be mpampiasa, manomboka amin'ny vokatra nomerika sivily sy serasera hatramin'ny fitaovan'ny indostria ka hatramin'ny famatsiana herinaratra miaramila. Ny vokatra samihafa dia mitaky tady sy tanjaka isan-karazany. Noho izany, maro ny tranga misy ny lithium-ion ...
Iza no tsara kokoa, bateria lithium polymer VS bateria lithium ion misy vovo?
1. Ny bateria ionika Lithium dia mampiasa electrolytes ranoka, raha ny batterie lithium polymer kosa dia mampiasa electrolytes gel sy electrolytes matevina. Raha ny marina, ny bateria polymer dia tsy azo antsoina hoe bateria lithium polymer. Tsy mety ho fanjakana matanjaka io. Marina kokoa ny iantsoana azy hoe batery tsy misy f ...
bateria lithium VS bateria acid-lead, iza no tsara kokoa?
Ny fiarovana ny batterie lithium sy ny bateria asidra firamainty dia nahatonga hatrany ny fifandirana teo amin'ireo mpampiasa. Misy milaza fa ny bateria lithium dia azo antoka kokoa noho ny bateria asidra firaka, fa ny hafa kosa mihevitra ny mifanohitra amin'izay. Raha ny fahitana ny rafitry ny bateria, ny fonosana bateria lithium ankehitriny dia ...
Oviana no noforonina ny bateria- Fampandrosoana, fotoana ary fampisehoana
Ny maha-haitao tena haitao sy hazondamosina ny zavatra rehetra azo entina, ny fitaovana ary ny haitao, ny bateria dia iray amin'ireo zavatra noforonin'ny olombelona tsara indrindra. Satria ity dia azo raisina ho iray amin'ireo famoronana tsara indrindra, misy olona liana amin'ny fanombohan'ny ...
Firoboroboana marika vaovao tsy miankina vaovao momba ny fitarihana politika hampitomboina ny tsindry misy eo aminy
Ao amin'ny tsenan'ny fiara vaovao, dia miharihary ny firosoana amin'ny politika, ary be ny isa fanampiana. Marika maro an'isa no mitarika amin'ny fakany amin'ny tsena amin'ny alàlan'ny vokatra angovo vaovao tsy mitovy, ary manankarena fanampiana. Saingy, ao anatin'ny tontolon'ny fihenan'ny ...
Mandeha an-dranomasina ny hery vaovao amin'ny fananganana fiara, i Eropa ve ilay kaontinanta vaovao manaraka?
Tamin'ny vanim-potoanan'ny fitetezana dia nanangana revolisiona indostrialy i Eropa ary nitondra an'izao tontolo izao. Amin'ny vanim-potoana vaovao, ny fiovan'ny herinaratra fiara dia mety ho avy any Shina. "Ny baikon'ny orinasam-piaramanidina mahazatra eo amin'ny tsenan'ny angovo vaovao eropeana dia nilahatra hatramin'ny faran'ny taona. T ...